Ukuthelekiswa kweselula: Doogee V10 vs Doogee V20 | Iindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 20/12/2021 08:51 | Iiselfowuni, Umnxeba
I-Doogee iyaqhubeka nokubheja kwimarike yeefowuni eziphathwayo ezihlakaniphile kunye ezinqabileyo, oko kukuthi, zineempawu ezininzi ezenza zibe zizodwa kwaye zixhathise ngakumbi. Le yindlela abaza kuphehlelela ngayo iV20, isixhobo esibekwe njengencopho yeminyaka eliqela yamava nokuzinikela. I-Doogee V20 entsha yindlalifa ngokuthe ngqo kwi-Doogee V10, imodeli efumene iziphumo ezintle. Zombini izixhobo zinento efanayo, kodwa ngokucacileyo zineyantlukwano enkulu ngenxa yokutsha okukhulu kweminyaka yakutshanje, sizithelekisa.
Thatha isithuba se Unikezelo lwe-Doogee V20 Dual 5G ngokubhalisa phakathi kwabathengi abali-1.000 bokuqala.
1 Ukufana kwezixhobo zombini
2 Umahluko phakathi kwezixhobo zombini
Ukufana kwezixhobo zombini
Enye yezinto ezifanayo eziphambili phakathi kwezi zixhobo zimbini kukuba zombini ziqala kwisiseko sokuba ukuba aziphuli, akufuneki zilungiswe. Zombini iimodeli zonyusa iprosesa engundoqo ezisibhozo ukuphucula ukusebenza kwazo kwaye zibonelele ngeempawu kulandelelwano lwemini. Ngendlela enye, Baneseva yeminwe ebekwe kwicala le-bezel yesixhobo, ikhamera ye-16MP ye-selfie kunye nokutshaja ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kwi-33W ehamba ne-NFC. kunye nenkxaso yeefrikhwensi ezininzi ezenza zihambelane kakhulu kuwo nawuphi na ummandla.
Inokwenzeka njani enye into, zombini ezi zixhobo zinezatifikethi eziphezulu malunga nokumelana nemozulu embi yazo zonke iintlobo IP68, IP69K kwaye ngokuqinisekileyo umgangatho womkhosi we-MIL-STD-810 kunye nesiqinisekiso sayo esilandela.
Nangona kunjalo, ngoku lixesha lokugxila kwiiyantlukwano eziqaqambileyo.
Umahluko phakathi kwezixhobo zombini
Njengophawu olwahlukileyo, i-Doogee V10 yakudala yayinethermometer ye-infrared ngasemva ukuze ikwazi ukulinganisa ubushushu ngokukhawuleza, nangona kunjalo, I-Doogee V20 ifune ukuya phambili kwaye yongeze isikrini esitsha ngasemva esiza kusinika ulwazi oluthile olufana nezaziso, ixesha kunye nokunye okuninzi. Into esiye sayibona kuphela kwezinye iiterminals eziphezulu.
Isikrini esingcono se-AMOLED kunye nesisombululo esiphezulu
Isikrini esingasemva ukusinika ulwazi
Isikrini sangaphambili okanye esiphambili sithathe umtsi obalulekileyo, kwaye ngoku sinescreen esibenyezelayo I-AMOLED ene-6,43-intshi ye-FHD + isisombululo, eza kuthatha indawo ye-classic ye-6,39-intshi ye-HD + isisombululo se-LCD eyayixhonywe kwi-Doogee V10. Oku ngokungathandabuzekiyo ibe yenye yezona zinto zibalulekileyo zokutsiba malunga nokulungelelaniswa nobuchwepheshe besizukulwana samva nje, ngendlela efanayo. Iphaneli ye-AMOLED ye-Doogee V20 eyenziwe yi-Samsung iya kubonelela ngomlinganiselo we-20: 9. xa kuthelekiswa ne-19: 9 ye-Doogee V10, kunye nokwahlukana okukhulu kunye nezakhono ze-HDR, kunye nokuphucula ukukhanya okukwaziyo ukunikela.
Kule meko ubungakanani kwi-mAh yebhetri iyancipha kakhulu, Ngoxa i-Doogee V10 inikezela nge-8.500 mAh, i-Doogee V20 entsha iya kuhlala kwi-6.000 mAh. Ngelixa bobabini begcina i-33W intlawulo ekhawulezayo, iDoogee V20 entsha iya kubonelela ngokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nomgangatho weQi ukuya kuthi ga kwi-15W, edlula i-10W yokutshaja ngaphandle kwamacingo egcinwa yiDoogee V10 ukuza kuthi ga ngoku. Oku kwenza i-Doogee V20 icwecwe ngakumbi kwaye ibe khaphukhaphu, nangona kunjalo, u-Doogee uthembisa ukuba ixesha lokusetyenziswa kwesixhobo ligcinwe ngebhetri ephantsi ngenxa yokulungiswa kokubini kwiNkqubo yokuSebenza kunye nakwinqanaba le-hardware, konke oku kuxhamla ngokucacileyo kwiphaneli ye-AMOLED ukuba ngoku isebenzisa kwaye ephucula ukusetyenziswa kwesikrini kwi.
Ikhamera yenye yamanqaku athe achaphazeleka kakhulu ngokulungiswa, makhe sijonge kuzo zombini iikhamera:
Ikhamera ephambili ye-64MP
Ikhamera yombono we-20MP ebusuku
Ikhamera ye-8MP ebanzi ye-engile
Ikhamera ephambili ye-48MP
2MP Macro Ikhamera
Ukusuka kweli nqanaba ikhamera iphuculwe ngokumangalisayo njengoko sibonile, ngelixa ihleli (njengoko besitshilo ngaphambili) ukusebenza kakuhle kwekhamera ye-16MP selfie ngaphambili.
Kwinqanaba lememori kunye nokugcinwa, iDoogee V20 ikhula ukusuka kwi-128GB ye-V10 ukuya kwi-256GB yemodeli yangoku, usebenzisa iteknoloji ye-UFS 2.2 ukuphucula ukusebenza kokudluliselwa kwedatha. Ewe kunjalo, i-8GB yememori ye-RAM yazo zombini izixhobo igcinwa.
Ngokungathandabuzekiyo i-Doogee V20 yindaleko ecacileyo ejolise ekuxhaseni ilifa leDoogee V10, ukuqhubela phambili kweDoogee V Series eya kunikezelwa nayo izaphulelo ezinkulu kunye nezibonelelo kwi-portal ye-Doogee esemthethweni. Umhla wokukhutshwa uya kubhengezwa kungekudala kwaye abathandi beefowuni ezinqabileyo baya kwamkeleka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Uthelekiso lweselula: Doogee V10 vs Doogee V20
I-Petkit Pura X, ibhokisi yenkunkuma yekati yakho ekrelekrele kwaye izicoca